Maungtintyin: ဆက်လက်၍ သင့်ကိုယ်သင် ပြဋ္ဌာန်းပါ
နောက်ကို ပြန်ကြည့်တဲ့အခါ- ပြီးတော့ ရောက်လာဖို့ မသိရသေးတဲ့ ရှေ့ဆီသို့ ကြိုတင်ကြည့်ရှု့တဲ့အခါ- ဒို့တတွေ ဟာ ဘ၀တစ်လျှောက်လုံး ငါတို့ကိုယ်ကိုငါတို့ ပြဋ္ဌာန်ထားပြီးပြီဆိုတာ တို့တတွေ မြင်တွေ့နိုင်လာပါတယ်။
အဲဒီအပေါ်မှာ တုံ့ပြန်ခြင်းမရှိဘဲ အတွေ့အကြုံတွေကို စုပ်ယူထားတဲ့ ရေမြှုပ်လို- ဘ၀အပေါ်မှာ ဒို့တတွေ နေထိုင်ပြီးဖြစ်လျင်- ပြီးတော့ အခြားသူများရဲ့ ထောက်ခံအတည်ပြုချက်ကို အနိုင်ရဖို့ အမြဲတမ်းကြိုး ပမ်း နေလျင်- ဒို့တတွေဟာ ဘယ်တော့မှ စကြ၀ဠာကို ပုံဖော်ဖို့ ထောက်ကူအကျိုးပြုလိမ့်မယ်မဟုတ်ပါ။
ဘ၀ဟာ ဒို့တတွေအတွက် အခြားသူများက ပြုလုပ်တဲ့ ရွေးချယ်မှုရဲ့အခြေခံပေါ်မှာ နေထိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။ အဲဒီလိုမှမဟုတ်ယင်လည်း သူတို့ရဲ့မျော်လင့်ချက်တစ်ခုတည်းကို ဖြည်းတင်းပေးလျက် အလဟဿ ကုန်ဆုံး သွားကြပါတယ်။
ငါတို့တတွေ ထိတွေ့ပြီးခဲ့တဲ့ အပင်ငယ်များ- သစ်ကြီးဝါးကြီးများ- တိရိစ္ဆာန်များ- ပန်းများက ငါတို့တတွေကို ပုံဖော်ပြီးပါပြီ။ ဒို့တတွေရဲ့မိဘတွေက ဒို့တတွေကိုယ်တိုင် တိုးတက်ဖို့ ငါတို့တွေကို ကူညီခဲ့တဲ့အခါ- ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြဋ္ဌာန်းခြင်းအတွက် ပထမဆုံးခြေလှမ်းအချို့ကို ဒို့တတွေ သင်ယူခဲ့ကြပါတယ်။
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ငါတို့တတွေရဲ့ ရွေးချယ်မှု- ငါတို့တတွေရဲ့ အထူးပြုခြင်းများနဲ့ ဒို့တတွေရဲ့ အရည်အချင်းများဟာ- ဒီဖြစ်စဉ်များရဲ့ အားလုံးသောအစိတ်အပိုင်းတွေပဲ ဖြစ်ကြပါတယ်။
အခြားသူများရဲ့အမြင်တစ်ခုတည်းအပေါ်မှာ မှီခိုနေသူများအတွက်- သူတို့ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ ရွေးချယ်မှုများက သူတို့ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ အထင်သေးခြင်း ပမာမထားခြင်းကို ထင်ရှားသိသာစေခဲ့ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ဘ၀များကို အမိန့်သြဇာပေးဖို့ အခြားသူများကို လမ်းဖွင့်ပေးခြင်းဖြင့်- သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အပြု အမူတွေအတွက် သူတို့တတွေ တာဝန်မယူခဲ့ကြတော့ပါ။
မိမိကိုယ်ကိုယ်ပြဋ္ဌာန်းခြင်းဟာ တာဝန်ခံရခြင်းဖြင့် ကျင့်သုံးရတဲ့ ဆက်လက်နေတဲ့ရွေးချယ်မှုရဲ့ ဖြစ်စဉ် တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ခါတစ်ရံ အဲဒါများက အရေးပါအရာရောက်တဲ့အခြားသူများမှ သဘောကျထောက် ခံမှုဖြင့် အဖြေထွက်အကျိုးဆက်ပေါ်ပေါက်နိုင်ပါတယ်။
ဒို့တတွေကပြုလုပ်တဲ့ ရွေးချယ်မှုတွေအတွက် အခြားသူတွေက တို့တတွေကို ငြင်းပယ်နိုင်တဲ့ အချိန်အခါတွေ ရှိကြပါတယ်။ ဒို့တတွေကို ငြင်းပယ်ခြင်းဖြင့်- သူတို့တတွေဟာ ဒို့တတွေထက်ပိုလို့ သူတို့ကိုယ်ကိုသူတို့ ဘောင် ခတ်ကြပါတယ်။ သူတို့တတွေဟာ ငါတို့တွေက ခိုင်ခိုင်မာမာရပ်တည်တဲ့ တန်ဖိုးများကို ငြင်းပယ်ကြပါတယ်။ ငါတို့တတွေကို ကွဲပြားဆန်းသစ် တစ်မူထူးအောင်ပြုလုပ်တဲ့ ရွေးချယ်မှုဆိုင်ရာ လွတ်လပ်ခြင်းကို ငြင်းပယ်ကြ ပါတယ်။
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြဋ္ဌာန်းခြင်းဟာ ရက်ရှည်လများ ဒို့တွေကိုယ်တိုင်နဲ့ပတ်သက်လို့ ဆိုးဆိုးဝါးဝါးဖြစ်သွားအောင် ငါတို့တွေကို ခွင့်မပြုပါ။ ဒို့တတွေ ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးတဲ့ရွေးချယ်မှုကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာတဲ့အခါ- ဒို့တတွေက တိတ်တိတ် ဆိတ်ဆိတ် တည်ရှိနေခဲ့ပြီးတဲ့နေရာမှာတောင်- ဒီလိုမှမဟုတ် ဘက်လိုက်ခဲ့ပြီး မဟုတ်တဲ့ နေရာမှာတောင်- ဒို့တတွေဟာ ငါတို့ကိုယ်တိုင်အတွက် မှန်ကန်ခဲ့ပြီးပြီ- ဆိုတာ မြင်တွေ့ရပါတယ်။
ဒို့တတွေဟာ အခြားသူတွေကို ဆန့်ကျင်ရင်ဆိုင်လျှက် အစွမ်းပြခုခံထားရမဲ့ နံရံတံတိုင်းတွေ- ဒါမှမဟုတ် ဒို့တတွေ ဖန်တီးအစပြုခဲ့တဲ့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အကွာအဝေးတွေဟာ- ဖြစ်စဉ်ရဲ့ အားလုံးသော အစိတ် အပိုင်း တွေပဲ ဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်။
ဒို့တတွေဟာ အသက်အရွယ်ရလာတာနဲ့အမျှ- ဒို့တတွေ စိတ်မြန်လက်မြန်လုပ်တာ နည်းပါးလာပါ တယ်။ ပြီးတော့ ဓမ္မဓိဋ္ဌာန်ပိုကျလာပါတယ်။ ဒို့တတွေဟာ တုန်လှုပ်မှုကင်းပြီး သွေးအေးလာတာမှာ ရပ်တည် လာပါတယ်။
တစ်ဦးချင်းအနေနဲ့ ပြောင်းလဲဖြစ်ပေါ်ခြင်းရဲ့ ဖြစ်စဉ်တွေမှာ- ဒို့တတွေဟာ ဒို့တတွေရဲ့ဘ၀များနဲ့ ပတ်သက် လို့ ရက်ထည်ကို ရက်လုပ်ယှက်ဖွဲ့ကြပါတယ်။ ပြီးတော့ နေ့စဉ် ဒို့တတွေက ဖန်တီးစီစဉ်တဲ့ ပုံစံဒီဇိုင်းတွေက စကြ၀ဠာကို ပုံဖော်ကူညီနေကြပါတယ်။ ရံခါများမှာတော့ ရှေ့ဆီဦးတည်တဲ့လမ်းတွေဟာ မသဲမကွဲမရှင်း မလင်းဖြစ်တဲ့အခါ- ယုံကြည်မှုတွေက နောက်ထပ်ရှေ့တိုးလို့ ရွှေ့လှမ်းဖို့ ဒို့တတွေကို ကူညီခဲ့ပြီး ဖြစ်ကြပါတယ်။
ပြန်လည် ရှုမြင်ကြည့်တဲ့အခါ- အတွင်းမှာရှိပြီးတဲ့ မနှစ်မြို့ဖွယ်ရာအခြေအနေတွေက တန်ဖိုးမဲ့တဲ့သင်ခန်း စာ တွေကို ဒို့တတွေကို သင်ခန်းစာပေးခဲ့ပြီးပြီဆိုတာ- ဒို့တတွေ တွေ့မြင်ကြရပါတယ်။
အခြားသူတွေက ဒို့တတွေကို တိုက်ခိုက်တဲ့အခါ - ဒို့တတွေဟာ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအရ လက်တုံ့မပြန်ဖို့ သင်ယူခဲ့ပြီးပါပြီ။ ဒို့တတွေကို မအောင်မြင်သူအဖြစ် သဘောထားခံရပြီးတဲ့အခါ- ဒို့တတွေ ဟာ မျော်လင့်ချက်တွေနဲ့ ဆက်လက်ရှင်သန်နေထိုင်ခဲ့ပြီးပါပြီ။ ဒို့တတွေ သိနားလည်တဲ့အနေနှင့် ကမ္ဘာကြီးက ဒို့တတွေကို လက်မခံတော့တဲ့အခါ- ဒို့တတွေဟာ အခြားကမ္ဘာများဆီ ရွေ့လျားပြီး နေထိုင် အခြေချပြီး ဖြစ်ကြ ပါတယ်။
အခြားသူများနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ဘ၀ပေါ်မှာ ဘာအကျိုးကျေးဇူးတွေ ငါတို့တတွေ သက်ရောက်နိုင်ခြေ ရှိမလဲ-ဆိုတာ- ပြီးတော့ ငါတို့တွေ စကြ၀ဠာကို ဘယ်လို ပုံဖော်မလဲ-ဆိုတာ- နားလည်းဖို့ ဒို့တတွေ စတင်လိမ့်မယ်-ဆိုတာက- ငါတို့ဘ၀တွေရဲ့ နိဂုံးပိုင်း ချင်းနင်းလာသည်သာ ဖြစ်ပါတယ်။
နံရံတံတိုင်းထက်ပိုသင့်တော်တဲ့ တံတားကို ဒို့တွေက တည်းဆောက်ခဲ့သလား? အခြားသူများကို လက်ကမ်း ခဲ့သလား? ဒါမှမဟုတ် အခြေအမြစ်မရှိတဲ့အစွဲအလမ်းများနှင့် တစ်ယူသန်သဘောထားများရဲ့ ကျဉ်းမြောင်း တဲ့ပြဋ္ဌာန်းချက်မှာ ငါတို့ကိုယ်ကိုယ်ငါတို့ အကျဉ်းချခဲ့သလား? အခြားသူများရဲ့အမြင်များကို ဖွင့်ဟဖို့- ပြီးတော့ နားရှိတာကို သူတို့ကို ပြဖို့ အခြားသူတွေကို ခွင့်ပြုခဲ့သလား?
ဒါမှမဟုတ် အသက်မပါတဲ့ ကိုယ်ပိုင်လိုအပ်ချက်တွေ ကျော်လွန်ပြီး- ဒို့တတွေ မတွေးခေါ်နိုင်တာကို ဒို့တတွေက ကိုယ့်အတွက်သာ အရမ်းသိခဲ့သလား? မွေးရာပါပင်ကိုယ်မူလ စိတ်အထဲ ဒို့တတွေ ရောက်ခဲ့သလား? အခြားသူများနှင့် ဘုရားသခင်တော်ကို စပ်ဆက်ပေးခဲ့သလား? အချိန်ကသာလျင် ပြောနိုင်ပါတယ်။
ဒို့တတွေဟာ ဒို့တတွေ့ရဲ့နောက်ဆုံးအသက်ရှုမှုကို ယူသည့်တိုင်- ဒို့တတွေဟာ ဒို့တတွေရဲ့သဘောထားနဲ့ အပြုအမူများမှတဆင့် ငါတို့ကိုယ်ကိုယ်ငါတို့ ဆက်လက်ပြဋ္ဌာန်းဖို့ လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ ကျယ်ပျံ့တဲ့ စကြ၀ဠာမှာ အလှအပနှင့် ညီညွတ်မှုရဲ့ဖန်တီသူအဖြစ်ဖြစ်စေ- ဒီလိုမှမဟုတ် အခြားသူများနဲ့ ကိုယ်ပိုင်ဘ၀ကို အနှောင့် အယှက်ပေးတဲ့ အချိန်နှင့် စွမ်းရည်ရဲ့ ကြီးကျယ်တဲ့ပမာဏကို အသုံးပြုတဲ့ ပွဲဖျက်အဖြစ်ဖြစ်စေ- ငါတို့ကိုယ်ကိုယ်ငါတို့ သတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းပြီးတဲ့ နည်းလမ်းကို- ဒို့တတွေ ဆက်လက် ထုတ်ဖော်လှစ်ဟ ဖွင့်ချနေပါ လိမ့်မယ်- ဆိုတာပါပဲ။